लाप्चाली कृषक रासायनिक मल प्रयोग गर्दैनन् – NewsAgro.com
लाप्चाली कृषक रासायनिक मल प्रयोग गर्दैनन्
January 21, 2014 newsagro0Comments
यो समाचार 271 पटक पढिएको
सोलुखुम्बु, ७ माघ । जिल्लाको लागि वार्षिक रूपमा मलको कति कोटा प्राप्त भयो अनि कतिबेला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्लेरीले मल प्रदान गर्छ भनि अधिकांश कृषक पहिल्यै कान ठाडो परेर बसिरहेका हुन्छन् । तर सोलुखुम्बु लाप्चाका कृषकहरू भने जिल्लामा मल आओस् या नआओस् कुनै चासो राख्दैनन् ।
अन्य गाविसमा मलकै लागि कुपनको खोसाखोस भइरहँदा पनि लाप्चाका किसानहरू मल पाउनु र नपाउनुसँग कुनै अर्थ राख्दैनन् । किनकि गोराखानी–८ लाप्चाका कृषकहरू कहिल्यै पनि रासायनिक मल नै प्रयोग गर्दैनन् । गाविसका अन्य भागका कृषकहरू रासायनिक मलको विषयमा विवाद गरिरहँदा लाप्चाली कृषकहरू आफ्नो गाईवस्तुको मल सोहरिरहेका हुन्छन्, कोही स्याउलाको भारी ल्याइरहेका हुन्छन् अनि कोही वर्षामासका लागि पत्करको जोहो गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले लाप्चाली कृषकका लागि रासायनिक मल पाउँदा खुसी हुनुपर्ने र नपाउँदा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छैन । उनीहरू त आफूले उत्पादन गरेको खाद्यन्नको भाउ बढ्दा खुसी हुन्छन् अनि कहिलेकाही वर्षभरि लगाएको कमाई हुरीले एकैछाक पार्दा दुःखी हुन्छन् । रासायनिक मललाई विकासे मल भन्न रुचाउने लाप्चाली कृषकहरू भन्छन् ‘‘हामीले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि विकासे मल लगाएका छैनौँ र आउँदो दिनमा पनि लगाउने छैनौँ’’ । रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भए पनि बारीको उत्पादकत्व क्षमता घट्दै जाने र माटोमा ह्रास आउने कुरा सुनेकाले गर्दा लाप्चाली कृषकले रासायनिक मल प्रयोग नगरेका हुन् ।
लाप्चाकी कृषक पुषमाया तामाङ भन्नुहुन्छ “क्षणिक लोभले गर्दा हाम्रो बारी नै बिग्रियो भने के कमाई लगाउनु ? मल प्रयोग गर्नेहरूको हेर्दा बारी साह्रो हुने र ठूलो–ठूलो डल्ला उठ्ने गरेको देखेँ त्यसैले प्रयोग नगरेकी हुँ” । सबै कृषकको प्रतिनिधित्व गर्दै कृषक तामाङले थप्नुभयो “यहाँका सम्पूर्ण कृषकले विकासे मल कस्तो हुन्छ देखेका पनि छैनन्” । मल नियमित नपाउने भयले गर्दा पनि लाप्चाली कृषकले रासायनिक मल प्रयोग नगरेको देखिन्छ । लाप्चाका अर्का कृषक फुर्वा तामाङले भन्नुभयो “एक वर्ष मल लगाएर उत्पादन बढ््यो भनेर मख्ख होउला तर बर्सेनि पाएन भने त उत्पादन घट्छ रे ! अनि किन लगाउनु रासायनिक मल ?” रासायनिक मल प्रयोग गरेर छिमेकी गाविसका कृषकले थुप्रै उत्पादन बढाउँदा पनि लाप्चाली कृषकलाई कहिल्यै लोभ्याएन, बरु आफ्नो बारीको साँधमा रहेको बारीमा छिमेकीले रासायनिक मल प्रयोग गरिदेला कि भन्ने चिन्ताले सतायो ।
भूपू गाविस सचिवसमेत रहेका देन्डी तामाङ भन्नुहुन्छ “आफ्नो बारीको साँधमा अरूले रासायनिक मल प्रयोग गरेर आफ्नो बारी पनि बिगार्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो तर हाम्रो गाउँमा कसैले पनि प्रयोग गरेनन् अहिले त ढुक्क छु ।” रासायनिक मल प्रयोग गर्ने कृषकले जति नै उत्पादन गर्न नसके पनि प्राङ्गारिक मलबाट पनि अपेक्षित उत्पादन भइरहेको कृषकको अनुभव छ, । उनीहरू भन्छन् सरकारले मल देओस् या नदेओस् हामीलाई कुनै पनि चिन्ता छैन । अरू कृषकहरू बारी बिग्रियो भनेर यत्तिबेला पछुताउँछन् हामीले पो बेलैमा बुद्धि पु-याएछौँ’ ।
← कुखुरा व्यवसाय सङ्कटमा
कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन →
निगमले चियाको सट्टा रवर खेती सुरु गर्यो, स्थानिय आक्रोशित
May 19, 2014 newsagro 0
मूल्य तय नहुँदा उखु किसान चिन्तित
January 12, 2015 newsagro 0